ဘာကြောင့် Zip Code တွေကို အသုံးပြုကြတာလဲ
16 May 2019 . 6:31 PM
အရင်ခေတ်တုန်းကရော၊ အခုခေတ်မှာရော Zip Code တွေကို အသုံးပြုပြီး အဆက်အသွယ်တွေ ပြုလုပ်ကြပါတယ်။ Zip Code တွေကို တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်အသုံးပြုခဲ့ကြပေမယ့် ဘာကြောင့်အသုံးပြုကြလဲဆိုတာကိုတော့ သေသေချာချာ သိပ်မသိကြပါဘူး။ Zip Code က ဘာလဲ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကို သိတဲ့သူက ရှိတော့ရှိနိုင်ပေမယ့် ရှားပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်မို့ ဘာကြောင့် Zip Code သုံးတာလဲ Zip Code တွေမှာပါတဲ့ နံပါတ်တွေက ဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ရလဲ ဆိုတာကို အကြမ်းဖျင်းလောက်သိစေဖို့ ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။
ဘာကြောင့် Zip Code တွေသုံးတာလဲ
Zip Code ဆိုတဲ့ ဆက်သွယ်နည်းကို စပြီးသုံးတာကတော့ ၁၉၆၃ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့က အစပြုတာပါ။ အဲ့မတိုင်ခင် ၁၉၄၃ ခုနှစ်တုန်းက အမေရိကန် စာတိုက်ဝန်ဆောင်မှုကနေ မြို့ကြီးပြကြီးတွေကို ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ပေးနိုင်ဖို့အတွက် Postal Zone စီရီးတွေကို အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ လိပ်စာတွေကိုရေးပြီး အဲ့နောက်မှာ နံပါတ်တွေကိုရေးကာ နံပါတ်ရဲ့နောက်မှာ မြို့၊ ပြည်နယ်တို့ကိုရေးပြီး အမြို့မြို့အနယ်နယ်မှာရှိတဲ့ စာတွေကို ထိထိရောက်ရောက်နဲ့ မြန်မြန်ဆန်ဆန် ပို့ပေးနိုင်ဖို့ အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ Zip Code ဆိုတာက စာပို့ Code တွေဖြစ်ပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံ စာပို့လုပ်ငန်းတွေက အသုံးပြုခဲ့ရာကနေ စတင်ပေါ်ပေါက်လာတယ်လို့ ပြောရမှာပါ။
Zip Code တွေမှာပါတဲ့ နံပါတ်တွေက ဘာအဓိပ္ပါယ်လဲ
၁၉၄၄ ခုနှစ်မှာ Robert Moon ဆိုတဲ့ စာပို့သမားဟာ တစ်နိုင်ငံလုံးအသုံးပြုနိုင်မယ့် Postal Zone စနစ်အသစ်တစ်ခုကို အဆိုတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ ပထမဆုံး နံပါတ်ကတော့ နိုင်ငံတစ်န်ုိင်ငံရဲ့တည်နေရာအတွက် ရပ်ညွှန်းပါတယ်။ ဒုတိယနဲ့ တတိယနံပါတ်ကတော့ ဒေသကိုရည်ညွှန်းပြီး စတုတ္တနံပါတ်နဲ့ နောက်ဆုံးနံပါတ်ကတော့ ပေးပို့ရမယ့်စာတိုက်(သို့) ပေးပို့ချင်တဲ့ နေရာကို ရည်ညွှန်းတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန်စာတိုက်ဝန်ဆောင်မှုက နောက်ဆုံးမှာ သင့်တော်တဲ့ စာတိုက်ကို ညွှန်ပြတဲ့ အဆုံးနံပါတ်န်ှစ်ခုကို မွေးစားလာရာကနေ Zone Improvement Plan Code (သို့) Zip Code ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။
Zip Code ရဲ့အဆုံးမှာပါတဲ့ နံပါတ်လေးလုံးက ဘာလဲ
နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကြာတဲ့အခါမှာ ပထမဦးဆုံး Zip Code ရဲ့နောက်မှာ နေရာတွေကိုပါ ထည့်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ စာပို့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေက Zip Code တွေရဲ့နောက်မှာ ဂဏန်းလေးလုံးကိုထပ်ထည့်ပြီး ပိုတိကျလာအောင် ညှိုနိူင်းမှုတွေ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနံပါတ်တွေက ပေးပို့ရမယ့် စာတိုက်ရဲ့နေရာတွေကို ပိုတိကျအောင် လုပ်ပေးပါတယ်။ ခြောက်ခုနဲ့ ခုနှစ်ခုမြောက်နံပါတ်တွေက ပေးပို့ရမယ့် နယ်မြေ၊ အဆောက်အဦးရှိတဲ့ လမ်းအုပ်စုတွေကို ရည်ညွှန်းပါတယ်။ နောက်ဆုံးနံပါတ်နှစ်ခုကတော့ လမ်းတစ်ဖက်မှာရှိတာလား ဘယ်အထပ်မှာရှိတာလဲဆိုတာကို ရည်ညွှန်းပါတယ်။ ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ Zip Code ရဲ့သမိုင်းကြောင်း၊ Zip Code တွေကို ဘယ်တုန်းက စတင်အသုံးပြုခဲ့တာလားဆိုတာ ကောင်းကောင်းသိသွားလောက်ပြီ ထင်ပါတယ်နော်။
Photo Credit: Market Business News , Postal Museum
by Ngul Ciin . 21 hours ago
by Naw Hsel Hte .5days ago
by Naw Hsel Hte .7days ago